IPizzeria Bandy Grills | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Yitya usele » Izimuncumuncu kunye neepizzerias » IPizzeria Bandygrillen
Kunye neVetlandavägen eMarlilla yiBandygrillen.
Apha ungakhetha phakathi kweeburger, iisoseji, iibhola zenyama, kebabs, inkukhu.
Ngexesha lasehlotyeni kukwakho nebala elincinci langaphandle.
NgoMvulo: 11–21NgoLwesibini: 11-21NgoLwesithathu: 11-21NgoLwesine: 11-21NgoLwesihlanu: 11-21NgoMgqibelo: 11-21NgeCawa: 11-21
IVetlandavägen 108, 570 82 UMarlilla, Sverige
3.9 ngaphandle kwe-5.0
183 uphononongo kuGoogle
Wajika inqanawa ejikeleze iMarlilla Pizzeria kwaye wayijonga iPizzeria Bandygrillen. Umbono omdaka, imiqondiso ebhalwe ngesandla ebhalwe lilanga- siyathemba ukuba ukutya kulungile. Ufuna ipitsa enazo zonke iincasa. I-banana, inyama yehagu, ikheri, ibea. Ungcamle .... akhonto. Ngaba bendicinga ukuba ndilahlekile incasa yam, covid mhlawumbi? Ukunyanzelwa, kungakufanelekeli ukujika okanye imali .Hayi, abasebenzi balungile kodwa ayincedi nganto. Iinkwenkwezi ezi-2 zenkonzo ekhawulezayo (umthengi omnye)
I-pizza ayisiyonto inkulu kodwa ii-burger ziyathandeka. Isithako sephunga lomsi wecuba ekukhonzeni.
3/5 3 kwiinyanga ezidlulileyo
Kulungile, ipitsa elungileyo, ixesha elincinci kakhulu kwi-oveni
4/5 4 kwiinyanga ezidlulileyo
Ukutya okufanelekileyo amaxabiso amahle
Apha ufumana umqulu wenkukhu olunge kakhulu! Intsha kwaye inkulu. I-kebab ikwacetyiswa.